Salav Garment Steamer GS-29BJ | Buy online | SHOP.COM.MM
Salav Garment Steamer GS-29BJ
650W ~ 1500W Power
Cool-Touch E.V.A hose
Patented Drain Plug
Good and easy to use. This Salav product helps to iron the clothes much faster. Read more Hide
Salav အမှတ်တံဆိပ် Garment Steamer လေးက မီးအားစွဲလည်းသက်သာပြီး သုံးရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ Read more Hide
နီလာတို့လို fashion ဆိုင်ဖွင့်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့မီးပူလေးပါ။ အစမ်းဝတ်ကြည့်လို့ ကြေသွားတဲ့အကျီဘောင်းဘီတွေကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပြန်ပြန့်အောင် မီးပူထိုးလိုအဆင်ပြေတယ်..မတ်ရပ်ဆိုတော့လူကမညောင်းဘူး။ သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်. Salav အဲ့တံဆိပ်လေးမဆိုးဘူး Read more Hide
Garment Steamer GS-29BJ + (Free Gift - Worth of 27600ks)
Specifications of Garment Steamer GS-29BJ
650W ~ 1500W